Rita, Writing for My Sake!: ချစ်လွန်းတင်
Posted by Rita at 6/02/2009 10:23:00 PM
မေရှင် အသံလေးကို အရမ်းကြိုက်၏။ သီချင်းလေးကို လဲ အရင်ကတည်းက ကြိုက်ပါတယ်။ ပုလုကွေးပထမဆုံးမန့်တာ...ဟီးဟီး ဖိုးစိန်လို ရေးကြည့်တာ
မေရှင် ရုပ်ရှင်ကားတိုင်းကို မလွတ်တမ်းကြည့်တယ်
အောင်ချင်းရှစ်ပါးကို ခုချိန်ထိ နေတိုင်းနားထောင်တုန်းပါ
နှောင်းခေတ်တေးပဒေသာလို့ ပြောလို့ရတဲ့ ခေတ်ဟောင်း မြန်မာသီချင်းတွေကိုတော့ အလှမ်းလည်း ဝေးသွားလို့ သိပ် နားမထောင်ဖြစ်ဘူး ( နားထောင်ဖို့ အာရုဏ်မပေါ်လာလို့လည်း ပါပါတယ်လေ ) .... နားထောင်ဖူးတဲ့ မြန်မာသံတေးတွေ ထဲမှာ သင်္ကြန်မိုးကားထဲမှာပါတဲ့ ဇာတ်ဝင်သီချင်းထဲက မအေးအေးခိုင်ဆိုတဲ့ ( တစ်ဖက်သတ်အချစ် ) သီချင်းရယ် နောက်ပြီး ကိုသန်းမြတ်စိုးဆိုတဲ့ ( ချစ်အာရုဏ် ) ... ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုတော့ တော်တော်လေး သဘောကျမိတယ် ... ဒီဘက်ခေတ်မှာ မြန်မာသံစဉ်ကို အချိတ်အဆက်မိမိ လှလှပပ မဖွဲ့နိုင်ကြတော့တာလား ... ဖွဲ့နိုင်ရက်နဲ့ ခံစားအားပေးကြမယ့် ပရိတ်သတ် နဲပါးသွားလို့ မြန်မာသံစဉ်သီချင်း စစ်စစ်တွေ ဆိတ်သုန်းရှားပါးကုန်တာလား ... ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါလေ ... မြန်မာတစ်ယောက်အတွက် မြန်မာသံစဉ်သီချင်းဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ဆိတ်သုန်းသွားမယ် မထင်ပါဘူး .. ဒေါ်မေရှင်ရဲ့ ချစ်လွန်းတင် သီချင်းလိုပေါ့ ...
မြို့မငြိမိးမို့ ဒီလိူစာသားနုနုလေးတွေ ထွက်တာပေါ့ဗျာ
ကြိုးကျစ်ရာမှ တစ်လွန်းတင် နှစ်လွန်းတင် လွန်းများများတင်လေ ခိုင်မာလေပဲ.. ဆရာ မြို့မငြိမ်း ရဲ့ အရေးအဖွဲ့လည်းတော်ပါတယ်.. ဥပမာပေးလဲကောင်းပါတယ်.. လူစိတ်ကို သိတတ်နိုင်လွန်းတယ်. မြို့မငြိမ်း၇ဲ့သီချင်းလောက်မကောင်းတာဘာကြောင့်လဲတဲ့...... အမ အဖြေဘယ်လိုများပေးချင်ပါသလဲ.....